Izesekeli Zezinja - Mundo Perros | Izinja Umhlaba
Umhlaba wezinja uguquke kakhulu futhi namuhla sinawo zonke izinhlobo zezinto ukwenza usuku lwethu lwanamuhla lube lula nabo. Akusizi ngalutho ukuthi ungumngane omkhulu womuntu, ngakho-ke ufanelwe yilo lonke ukunakekelwa esingamnika kona. Singahlukanisa izesekeli ngokusetshenziswa kwethu esibanika kona, ukwenza lula umsebenzi wokuzicwilisa ezweni elinikela ngezinto eziningi ngokwengeziwe.
I-Los izesekeli esetshenziswa izinja cishe umhlaba uhlukene, hhayi kuphela ngenxa ye- insiza ukuthi lokhu kuyabikwa, kodwa futhi ngu ngobuhle. e Izinja Zomhlaba sizothola imininingwane engcono kakhulu mayelana nokwakamuva izitayela ezindabeni ze-canine, kusuka imigexo noma ama-bhibs emidlwane nezinja ezindala, uma ukhololo noma a ukulungisa, ukusetshenziswa kwe amabhuzu, amalensi we-intraocular for cataract, isambulela, abaphindiseli noma umuthi wokuxubha, ngisho namathoyizi ocansi ezinja.
Kungenzeka kanjani ukukhuluma ngakho konke izesekeli zezinja ezikhona, sizokhuluma ngezinye ngokwezigaba. Kusuka kuzesekeli esizisebenzisa nsuku zonke kuya kulezo zenhlanzeko yakho noma lezo ezimangazayo nezintsha.
Izesekeli zansuku zonke
Usuku nosuku nenja luhlanganisa isethi yezesekeli ezibaluleke kakhulu. Ngaphambi kokuba inja ifike ekhaya sekufanele sibe nezimbalwa ekhaya ezilungiselelwe. Ngakho-ke singabuyekeza lezi zesekeli ukuze zicace mayelana nokuthi yini edingekayo nsuku zonke nenja. Okokuqala, enye yezinto eziyisisekelo yile beka indawo lapho inja izolala khona, esizodinga i- a umbhede wenja. Njengamanje kunezinhlobo ezingenakubalwa. Imibhede enezindwangu, isikhumba sangaphansi sokwenza kube lula ukuyihlanza, ngeplastiki noma ngegobolondo le-wicker futhi ikakhulukazi leyo mibhede eyenziwe ngogwebu futhi ikhululekile kuzo zonke izinja. Singathenga imibhede eyindilinga noma engunxande nemibhede enezimo zangempela. Kepha ngaphezu kwakho konke kufanele sicabange ngosayizi wenja, ukuze umbhede ukhululeke ngokwanele kuye.
Esinye isesekeli abazosisebenzisa nsuku zonke yilezi Los abondli bezinja nabanisela. Kukhona epulasitiki kepha okusansimbi kuhlala kunconywa kakhulu, okungangabazeki ukuthi kuzohlala isikhathi eside. Ezinye zalezo ezibonakala zifaneleka kakhulu kuzo zonke izinja yilezo ezinengxenye yeplastiki engasheleli phansi, evimbela inja ekuhuduleni okuphakelayo ngenkathi idla noma iphuza. Kungenzeka futhi ukuthi uthole izinto ezisezingeni eliphakeme, ezinjengama-feeder ahlinzeka ngokudla njengoba kudingeka, kepha lokhu kusetshenziswa kuphela uma sishiya inja yodwa isikhathi eside.
Ngakolunye uhlangothi, ukuhamba kubalulekile enja, ngakho-ke kuzofanele sikwenze thenga i-leash yakhe nokhololo noma i-harness ukuze uhambe naye. Okwamanje umhlaba wonke wamathuba uvuleka phambi kwethu. Okubalulekile ukuthenga i- umgexo wezinja Ukuthi ilingana nosayizi wayo ukuze ingaphunyuki, ukuthi ithokomele nokuthi iqine uma kwenzeka inja idonsa futhi inkulu, ukuze ingaphuli. Kungcono ukugwema imichilo esezingeni eliphansi engasethusa kakhulu. Amahhanisi asedume kakhulu kepha awanconyelwa uma inja idonsa kakhulu, ngoba ayinciphisi ijubane elikhulu lapho idonsa ngomzimba wonke hhayi ngentamo kuphela, njengalel. Ngokubambisana nebhande, sizodinga nezikhwama zendle ezinesiphathi sezikhwama, okulula ukuzithola namuhla.
I-Los amathoyizi nawo ayingxenye yempilo yansuku zonke yenja, ukuze sikuthengele. Kunezinhlobo eziningi, kusuka ku- amathoyizi athambile ezinja ezincane amathoyizi anezintambo noma amabhola aqinile. Okufunwa kakhulu ngamathoyizi afihla imiklomelo ngaphakathi futhi awavumele ukuba ajatshuliswe isikhathi eside.
Lapho sisohambweni nesilwane kufanele njalo sengeze ezinye izesekeli eziwusizo kakhulu. Omunye wabo ungumthwali. Sesivele sikutshele ngezinhlobo ze- abathwali bezinja, ngakho-ke umuntu ngamunye kufanele akhethe esifanela kakhulu isilwane sakhe, kungaba yisikhwama, ubhaka noma ikheji lensimbi. Ezindaweni eziningi kuphoqelekile ukuthi uzithwale, ngakho-ke sizoyidinga uma sifuna ukuzungeza umhlaba nenja.
La ikhava yezihlalo zemoto Kungokunye ukusungulwa okuhle ukuthi wonke umuntu onezilwane kufanele athenge. Isembozo sesihlalo esisiza ukugwema ukuhlanza imoto amahora amaningi ngemuva kokuthatha inja, ikakhulukazi uma ichitha izinwele eziningi. Kuyinto entofontofo, kulula ukuyifaka futhi ivikela okokufaka, noma ngabe inja iyahlanza. Kusungulwe impela.
Umhlaba we izingubo zezinja Futhi kwenza okuthunyelwe okuphelele kakhulu. Okwamanje siyathola izingubo zezinja zohlobo olusebenzayo, njengamajazi emvula ukuwavikela emvuleni noma izingubo ezifudumele zezinja ezinoboya obuncane. Kepha kukhona futhi umkhuba wokusebenzisa izingubo zezinja ngoba kuyimfashini, ikakhulukazi ezinhlotsheni ezincane ezibolekisa ngemiklamo emihle. Kujwayelekile ngisho ukubona amabhuzu ezinja, noma ngabe ezimweni zezinja ezihamba eqhweni kuyadingeka ukuvikela ama-pads azo.
Ukuhlanzeka kwezinja kubaluleke kakhulu, ngakho-ke kufanele futhi sicabangele izesekeli ezisemakethe. Enye yezinto ezibaluleke kakhulu kuzoba okama izinja. Ngokuya ngohlobo lwezinwele onazo, kufanele sithenge eyodwa noma enye. Kunamabhulashi akhethekile oboya obunemilenze emibili, bezinwele ezinde, ezisontekile noma ezigqamile. Kukhona nezesekeli ezenza lo msebenzi ube lula kithina uma inja yethu inezinwele ezimfishane nezijwayelekile, njengama-mittens wokuzikama.
Uma singomunye walabo sifuna ukwenza izinwele ekhaya ukuze songe kancane, singathenga i- Ayikho imikhiqizo etholakele.. Kukhona aphelele impela, anomshini, isikele kanye namakhanda ahlukahlukene. Ngalokhu singaba yizitayela zezinja zethu.
Phakathi kwezesekeli zenhlanzeko singathola ezinye izinto eziningi, njenge- ikhithi yokuhlanza amazinyo. Lezi zinhlobo zezinto zingenza impilo ibe lula kithina nesilwane sethu futhi futhi zisisize ukuvakashela udokotela wezilwane kaningi, ngoba sizogcina amazinyo abo esesimweni esifanele.
Izesekeli zezinja ezimangalisayo
Izesekeli ezikhona namuhla zingafinyelela inani elikhulu lezidingo. Uma sihlola izitolo eziku-inthanethi sizothola izinto ezithakazelisa kakhulu. Isibonelo, ungathenga un isesekeli se-agility inja yakho ukuqala ukuqeqesha kulo mdlalo, noma ukuzijabulisa nje.
Izinsiza zokugeza izinja: isilwane sakho esifuywayo sihlanzekile futhi siyacwebezela
Por Nathi Cerezo kwenza Inyanga e-1 .
Ukugeza inja yakho kungaba isikhathi esimnandi kanye nobunzima (ikakhulukazi uma into embi ingakuthandi...
Izesekeli zokuhamba ezisebenzayo nezithwalayo zezinja
Ukuthi uzovakashela eCuenca noma uzovakashela ihlathi eliMnyama elikude, ihlobo liyasondela...
Amabhola ezinja, angcono kakhulu kumngane wakho omkhulu
Amabhola ezinja ayingxenye engahlukaniseki yalezi zilwane: kukangaki singawaboni kumamuvi...
Ukhilimu wenja othambisayo wezidladla nekhala
Por Nathi Cerezo kwenza Izinyanga ze-2 .
Nakuba kungase kubonakale kuwubuwula, ukhilimu othambisa izinja uyadingeka kakhulu ukuze sigcine isikhumba sesilwane esifuywayo...
Izixubho zezinja zingenye yezindlela zokugcina inhlanzeko yamazinyo esilwane esifuywayo ngoku...
I-dog poop scoopers engcono kakhulu yazo zonke izinhlobo
Ama-dog poop scoopers ngokuvamile ahlukaniswa abe izinhlobo ezimbili, kuye ngokuthi mancane noma makhulu, kodwa...
Izingubo Zenja Ezingcono Kakhulu Zazo Zonke Izinhlobo
Por Nathi Cerezo kwenza Izinyanga ze-3 .
Izingubo zokulala zezinja azigcini nje ngokufeza umsebenzi wazo njengabavikeli bakasofa noma ukwenza umbhede we…
Inja: ukudla okumnandi kwesilwane sakho
Por Nathi Cerezo kwenza Izinyanga ze-4 .
Ukudla okulula kwenja, ngemva kokudla esikunikeza isilwane sethu nsuku zonke, ingxenye evamile...
amabhande esihlalo senja
Amabhande ezihlalo ezinja abalulekile uma sihamba nenja yethu...
Ama-underpads angcono kakhulu ezinja: ukuthi ziyini nokuthi uzijwayeza kanjani inja yakho
Por Nathi Cerezo kwenza Izinyanga ze-5 .
Amaphedi ezinja anemisebenzi emibili esemqoka (ikakhulukazi esetshenziselwa ukuchama noma ukuchama) futhi awusizo ku...
Ubhasikidi webhayisikili wezinja, phatha isilwane sakho ngokunethezeka nangokuphephile
Kubalandeli bamabhayisikili kanye ne-ecology, ubhasikidi webhayisikili wezinja ungaba inketho enhle...